Galmudug oo ka hadashay dagaalkii Gaalkacyo ka dhacay – STAR FM SOMALIA
Galmudug oo ka hadashay dagaalkii Gaalkacyo ka dhacay
Maamulka Galmudug, ayaa waxa ay ka hadleen dagaalkii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, kaasi oo u dhaxeeyay Maamulada Puntland iyo Galmudug.
War qoraal ah oo ka soo baxay Maamulka Galmudug ayaa waxaa looga hadlay dagaalkaasi, iyadoo Maamulka Galmudug ay beeniyeen in dagaalka ay qayb ka ahaayeen xubno Shabaab ka tirsan, xilli Puntland ay jeedisay eedeynta noocaasi ah.
Galmudug ayaa sheegtay dagaalka inuu biloowday, kadib markii Maamulka Puntland ay dhismo ku bilaabeen dhul uu muran ka taagan yahay, kaasi oo ay ku muransan yihiin Maamulada Galmudug iyo Puntland.
“Waxaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Dowlad- Goboleedka Galmudug iyo kuwa Puntland kadib markii ay dhismo ka bilaabeen dhul aan dhismo loogu talo gelin oo murano ka jireen iyaga oo howlgalkooda ka bilaabay rasaas ay soo fureen, ciidamada Galmudugna halkaas ayay difaac iyo iska cabin ka bilaabeen.”
“Waxaa wax lala yaabo ah in Puntland Warsaxaafadeed ku soo saarto waxaa na soo weerar Ciidamada Galmudug iyo Al-Shabaab isgarabsanaya taas oo ah faham aad u hooseeya, waayo wax isgarabsi ama cilaaqaad ah oo ka dhaxeeya ama ka dhaxaynkara Dowlad Goboleedka Galmudug iyo Al-Shabaab ma jiro, balse Galmudug iyo Al-Shabaab waxaa ka dhaxeeya dagaal, waxaana ka go’an Galmudug in ay ka sifeyso degaanadeeda Al-Shabaab.”
Shabaab oo xukun dil ah ku fuliyay nin dhalinyaro ahaa